ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: What is capacity in China ?
What is capacity in China ?
ဒီကနေ့ မနက်စောစော Facebook ၀င်ကြည့်တော့ “ကက်ပဲဆစ်တီးပြည့်အောင်လုပ်ကြပါ”…ဆိုတ ဆောင်းပါးကိုဖတ်လိုက်ရ တော့ ထင်မြင်ချက် လေး ထပ်ဆင့်ပြီး မိမိရဲ့ Wall မှာတင် ပေးလိုက်မိတယ်။
လောက မှာအရာရာကို နှစ်ဖက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ငါ့ကိုချတာကွ လို့မြင်ရင် စိတ်ဆိုးမယ် ၊ ရန်ထောင်ချင်လာမယ် ၊ ပြန်တုံ့ပြန်ချင်မယ်
ဥပမာ စာရေးသူ က တော်လှန်ရေးသမားတွေ ကို ကပယ်စီတီ (Capacity) ပြည့်အောင်လုပ်ကြပါ လို့ပြောမိတော့ အနာပေါ် ထုတ်ကျသလို ထိသွားပြီး ပြန်ချမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရိုင်းတွေ ၀င်လာပြီ။
ဥပမာ စီးပွားရေးပညာတွင် လည်း Political Economist နဲ့ Professional Economist မတူပါ။ Political Economist က ဘယ် စီးပွားရေး ပေါ်လစီ ကိုရွေးရမလဲ လောက်သာရှိအောင် စီးပွားရေး သီအိုရီ အခြေခံ တွေကိုသာ သိတာပါ။ Professional Economist ကသာ Quantitative Analysis အပါအ၀င် လိုအပ်ချက် အစအဆုံး ကိုဖေါ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်မြူနစ်ဆိုရင် အမှန် ၊ ကွန်မြူနစ်ဆိုရင် မျက်စိမှိတ် ကာကွယ်ကြ ဆိုတဲ့ သခင်စိုးနဲ့ သခင်သန်းထွန်းတို့ ရိုက်သွင်းခဲ့ကြတဲ့ (စိုး/သန်း) စိတ်ဓါတ်ကြောင့် သခင်ဗသိန်းတင်ရဲ့ မဟာအမှားတော်ပုံတွေကို မမြင်နိုင်ကြ ဖူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော် ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ တဖက်က ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော် ရဲ့ နံမည် - ရာဇ၀င်ကို အသုံးချပြီး စွပ်ပြီး သူရဲကောင်းအဖြစ် မြှောက်ပင့် နေကြပေမဲ့ တဖက်က …ကပ်ပြီး (နှိမ်) ထားခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ ကို အဝေးကမြင်ရင် ကြည့်ကောင်းအောင် စစ်သူကြီးတန်စာ တွေဆင် ၊ ရွှေထီးမိုးထားပြီး ..တကယ်တော့ အနီးကပ်ကြည့်ရင် … နောက်ပြန်ကြိုးတုတ် ၊ လက်ထိပ်ခပ်ထားတာ နဲ့ အတူတူပါပဲ။ “ ထို့ ကြောင့်ဤသို့ “ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ “သံပတ်ရုပ်ပေးထားသောကျော်ဇော်” ဆိုတဲ့ အခန်းလေးကို ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ စစ်မတိုက်ဖူးတဲ့ သခင်ဗသိန်းတင် ရဲ့ တပည့်က စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ၊ နာမည် ကျော် စစ်ဗိုလ်ချုပ် သူရဲကောင်းကြီးကိုတော့ စစ်မတိုက်ရတဲ့ ၊ သုတေသန လုပ်ခိုင်းထားပါသတဲ့ဗျို့ ။ ကြားလို့ကောင်းကြသေးရဲ့လား။ တရုတ်ကြီးက ပေးလာတဲ့ ငွေ ၊ လက်နက် ၊ စစ်သား ၊ အားလုံးကို ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော် လက် ထဲထည့်ပြီး ၊ (နိုင်အောင်တိုက်) ဆိုတဲ့ အမိန့်ပေးခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံ ရာဇ၀င် မပြောင်းဖူးလို့ ဘယ်သူ ပြောနိုင်မှာလည်း ။ ကိုယ့်လက်ထမှာ Ace (၃) လုံး ကိုင်ထားတာတောင် ထုတ်ရှိူး ရမှာ ကို မသိတဲ့ နောက် ဘာကြောင့်များ ဖဲသမား အမည်ခံနေဦးမှာလည်း။ ရွှေဥါဏ်တော် ဆူးရောက်လှတဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးပေပဲ။
ကပယ်စီတီ ဟူသော အသံတွက်သည် Oxford Learners Dictionary အတိုင်းထွက်ဆိုထားခြင်းပါ။ အသံထွက်ကို ဤနေရာတွင် နားသောတ ဆင်နိုင်ပါသည်။ http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/capacity
ဓါတ်ပုံ (၁) … ကြံ့ဖွတ်တွေကိုသာ တုန်လှုပ်စေသည်မဟုတ် ကွန်မြူနစ်တွေကိုပါ မနာလိုဖြစ်စေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ကို ကြိုနေကြသော လူပင်လယ်။
ဓါတ်ပုံ (၂) … ဘာသာမဲ့တဲ့ သောက်တရုတ်တွေ ဘုရားသားတော်တွေကို တိဗက်တွင် နှိပ်စက်စော်ကားနေကြပုံ။ ဗကပ တွေသာ အာဏါရခဲ့ရင် ဒီဘ၀ရောက်ပြီမှတ် ….
ကြံ့ဖွတ်တွေကိုသာ တုန်လှုပ်စေသည်မဟုတ် ကွန်မြူနစ်တွေကိုပါ မနာလိုဖြစ်စေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ကို ကြိုနေကြသော လူပင်လယ်။
ဘာသာမဲ့တဲ့ သောက်တရုတ်တွေ ဘုရားသားတော်တွေကို တိဗက်တွင် နှိပ်စက်စော်ကားနေကြပုံ။ ဗကပ တွေသာ အာဏါရခဲ့ရင် ဒီဘ၀ရောက်ပြီမှတ် ….
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:42 AM